Cunista Cunnadaada Eeyahaaga | Martech Zone
Cunista Dogfood kuu gaar ah
Jimco, Febraayo 6, 2009 Axad, Agoosto 23, 2009 Douglas Karr
Waxaad ka heli doontaa ereygan oo xoogaa loo adeegsaday internetka. Markaan kahadlayo blogging shirkadaha, Waxaan u isticmaalaa ereyga tan iyo markii hoggaamiyeyaasha shirkadeennu ay toos uga yimaadaan blog blogging company.
Taasi waxay tiri, kani waa sawir dhiirigalin ah oo aan ka helay StumbleUpon at Blog Xadhig Scott. Ka hadal cunista cuntadaada gaarka ah!
Xayaysiis noocee ah ayaad ku guuleysan kartaa adoo ku daraya badeecadaada? Waxaan jeclaan lahaa inaan arko tusaalooyin intaas ka badan oo tan ah!
Tags: adeegga gudbinta xogtamaamulka xogtaGuuldareysiga: Sirta Guushasoo celinta suuq geynta mashiinka raadinta maalgashigaturunturoonWordPress
Douglas Karr Friday, February 6, 2009 Sunday, August 23, 2009
Uma Fududeyneyso Suuqgeeyaashu
Ka Feker Muuqaal
Feb 6, 2009 markay ahayd 1:41 PM
Suuqgeynta B2B waxay ubaahantahay mudaharaadyo kadis ah, oo la iloobi karo sida tan.
Aniga oo ah kuupupinging copy, waxaan u sameeyay mid ka mid ah buuggayga buugayga: waxa ku jiray nin xabsi ku jira oo qolka qolka albaabku ku xidhan yahay qufulka baaskiil ee Kryptonite. Cinwaanka wuxuu ahaa si fudud 'Tuug Baaskiil'.
Feb 6, 2009 markay ahayd 5:20 PM
Doug, in kasta oo ay tani sawir weyn ka dhigayso, runta, sidaan qabo, waxay ka dhigaysaa suuqgeyn xun.
Xaqiiqdii, waxay ahayd $ 500 oo keliya lacagta dhabta ah ee lagu dhejiyay lacagta been abuurka ah, dadkuna waxay isticmaali karaan oo keliya cagtooda inay isku dayaan inay jabiyaan. Waardiye ayaa goobjoog ahaa si loo hubiyo in qofna uusan jebin sharciga oo dadku aysan heli karin inay hayaan lacagta haddii ay jabiyaan. -GizModo
Waxaan u maleynayaa in dalacsiintani ugu yaraan ay tahay wax yar oo khiyaano ah, maxaa yeelay kaliya gelinta dhawr boqol oo doolar iyo helitaanka nabadgelyo waxay muujineysaa in sheegashooyinka ku saabsan sheyga ay aad uga badan yihiin awoodaha dhabta ah. Ha yeelin aad aad dareento xoogaa hoos udhac ah kadib markaad ogaatay xaqiiqooyinkan?
Sidoo kale runti maahan tusaale "cunista cunnadaada u gaarka ah." Taasi waa erey warshad softiweer ah oo ku saabsan tijaabinta barnaamijyada aad abuurto adoo u adeegsanaya inay ku maamulaan meheraddaada. Waa is wax aad ku sameyso Compendium, laakiin inaad meel dhigto ku dhowaad gebi ahaanba lacag been abuur ah iyo waardiye saacado kooban ka dhigaya banaanbax dadweyne meheraddaada kuma wado sheygaaga. 3M ahaan inay dhab ahaantii "cunayaan cunnadooda eyga u gaarka ah," waa inay adeegsadaan muraayadaha amniga si ay si weyn u ilaaliyaan hantida shirkadaha.
Dadku waxay mudan yihiin in loola dhaqmo si daacadnimo iyo ixtiraam leh, isla markaana ay ku faanaan adeegsiga alaabooyinka aad abuurto waa hab fiican oo lagu tuso inaad aaminsan tahay shaqadaada. Isku soo wada duub sawir-qaade la xakameynayo si loo abuuro buuq been abuur ah waxay umuuqataa wax kayar gebi ahaanba daacadnimo iyo xushmad. Tani waa caqabad, maahan muujinta joogtada ah ee kalsoonida alaabadaada. Waxaan u maleynayaa in 3M ay tahay inay ka jawaab celiso sida dadku u fasirteen sawirkan oo ay raali gelin ka bixinayaan.
Feb 6, 2009 markay ahayd 8:33 PM
Wow - waxaad tahay indha indheeye aad u suugaan badan! (dhammaystir, cayna ma aha).
Re: Cunidaada dogfood-kaaga - hadey nidaamku tahay softiweer ama xayeysiin, runti dhib malahan. Taasi waa ra’yigeyga waana ku adkeysanayaa.
Re: Xayeysiin - qaddarinteydu waa hal-abuurka ku lug leh xayeysiinta. Hadday tahay is-taag iyo haddii kaleba dhib malahan; waxay dadka u horseedaa inay ka fekeraan wax soo saarka ama adeegga.
Waxaad u maleyneysaa in ujeedadu ahayd mid suugaaneed - in ay jiraan dhowr milyan oo doolar oo bannaanka ka ah meel 3M ay ku ilaalinayso muraayaddooda. Malahayga wuu ka duwanaa - si fudud inay doonayeen inay sheeko u sheegaan. Isla marka aan arko sawirka, waan fahmay sheekada.
Fikradayda, waxaan aaminsanahay inay tahay xayaysiis xoog badan.
Feb 7, 2009 markay ahayd 12:38 PM
Marka waxaad leedahay adoo xaqiiqda raadinaya ka dib aragtida sawirka wax raad ah kuma lahan aragtidaada xayeysiinta? Waxaan saadaalinayaa in ku dhowaad qof kasta oo arka sawirkan ka dibna waxbarto in ay ahayd galab istaag, waxaa jiray waardiye, waxaad kaliya laadi kartay muraayadda, lacagtii oo dhanna waxay ahayd mid been abuur ah — waxaad dareemi doontaa hoos u dhac. Tani waa astaan ​​lagu garto xun xayeysiinta: markaad ogaato in waxa aad moodeysay inuu run yahay runti maahan.
Waa fikrad weyn 3M inay ku muujiyaan awoodda muraayadooda meel fagaare ah. Laakiin maxaa diidaya inaad sameysid kubeel la ilaaliyo oo leh leben bulukeeti ah oo ku dulyaal galaaska xaashida ah? Mise sameynta dabaq quraarad ah? Kuwani waxay sheegaan sheeko weyn oo gebi ahaanba run ah!
Feb 7, 2009 markay ahayd 8:51 PM
Runtii ma ihi. Xayeysiin kasta oo aan aragno maalmahan waxay ka badbadineysaa 'sheekada sheeg', ha ahaato mid baabuur ama mid xayeysiis ah. Mar labaad, uma maleynayo in 3M ujeedkeedu ahaa inuu been sheego, waxay ahayd si fudud in lala yimaado xayaysiis hal abuur leh.
Xaaladdan oo kale, waxaan u maleynayaa inay shaqo fiican qabteen. Taallo dhagaxyo ah oo ku yaal muraayadda saameyn kuma yeelan lahaayeen (sidaan qabo). Taasi waxay lahadlaysaa 'xoogga' laakiin kamahadlayaan 'amniga' maaddada.
Hadda, haddii sawirku la socday muuqaal ama sheeko sheegeysa inay malaayiin doolar ku jiraan guddiga oo loo daayay 30 maalmood goob fagaare ah, ammaan la'aan… markaa waan kugu raaci lahaa. Si kastaba ha noqotee, 3M kuma raacin goobta waxyaabahaas midkood.
Qofna, maskaxdooda saxda ah ma aadi doonto oo waxay dhisi doonaan bangi cusub oo leh amaan laga sameeyay muraayadda amniga ee 3M ka dib markay arkeen tan, miyayna ahayn? Waxaan u maleynayaa maahan.
Febraayo 7, 2009 saacadu markay tahay 2: 42 AM
Taasi waa muuqaal qurux badan oo awood badan! Aniguna marwalba waan jeclahay weedha ah 'cun cunno cunnadaada'!
Febraayo 8, 2009 saacadu markay tahay 9: 59 AM
Waan ka xumahay Doug, laakiin waan ku raacsanahay Robby kan. Markii ugu horraysay ee aan arko sawirka waan rumaysan kari waayey in shirkaddu ku kalsoon tahay wax soo saarkooda in ay lacag badan ku dhex ridi doonaan gudaha, kaliya dadka ku dhiirranaya in ay xadaan.
Waxaan uga tagi lahaa faallo bartaada oo aan ku weydiinayo haddii ay hayaan wax kaamirooyin fiidiyoow ah oo qarsoon oo muujinaya dadka isku dayaya (oo loo maleynayo inay ku fashilmeen) inay jabiyaan muraayadda.
Laakiin mar uu Robby ku daadiyey digirta ku saabsan haysashada waardiye, kaliya isticmaalaya cagahaaga oo haysta lacag been abuur ah, waxaan dareemay in lay khiyaaneeyey.
Uma baahni inaan ka fikiro wax ka yar 3M (Weli waan iibsan doonaa qoraalo gadaal ah) laakiin xayeysiiska ayaa si cad u lumiyay dhammaan qiimayaashiisa aniga oo aanan u bixi doonin si aan u iibsado muraayadooda amniga.
Febraayo 14, 2009 saacadu markay tahay 2: 43 AM
Aniga oo tixgelinaya ololahan la bilaabay Feb. 2005, waxaan dhihi lahaa tani macno cusub ayey siinaysaa dabada dheer. Waxaan rajeynayaa in kooxda PR / Marcom ay wali heysato digniintooda google- xarigaan dhajinta ah ayaa layaabi doona.
2005 post: http://www.37signals.com/svn/archives/001064.php
Marka laga eego aragtida isgaarsiinta, tani waa muuqaal isla markiiba la aqoonsan karo oo la xiriira astaanta, wuxuu xoojiyaa qiimahooda wuxuuna soo bandhigayaa farriin awood leh. taasi waa wax adag in lagu sameeyo joogsiga baska.
Agoosto 7, 2009 saacaddu markay ahayd 4:51 PM
Gowraca Robby si cad uma fahmayo aduunka suuq geynta… waxaad hada ka hadlaysaa arintan hada miyaadan aheyn, Robby Hagaag, markaa, waxay umuuqataa inay ahayd aalad suuq geyn heer sare ah. Xayeysiintu waxay ku saabsan tahay abuurista sawir xusuus leh maskaxda qofka macaamilka ah, falkanina si cad looma ogaan doono. Iyadoo aan loo eegin baahidaada aan habooneyn in laga wada hadlo saxnimadeeda / saxsanaanta, iyo iyada oo aan loo eegin haddii sheyga uu dhab ahaantii u shaqeynayo sida aad uga soo bixi laheyd sawirka…. hadda waxaad si muuqata uga warqabtaa badeecadeeda. Hadda waxaad maskaxdaada ku haysaa sawir aan la tirtiri karin oo ah 3M muraayad badbaado ah. Marka? Suuq geyn heer sare ah, mudo.